नेकपाभित्रबाटै सभामुखको राजीनामा माग; के गर्लान् महरा ? « रिपोर्टर्स नेपाल
नेकपाभित्रबाटै सभामुखको राजीनामा माग; के गर्लान् महरा ?
प्रकाशित मिति : 2019 October 1, 10:28 am
काठमाडौं, १४ असोज । महिलामाथि जर्बजस्तीको आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराको पद धरापमा परेको छ । उनको राजीनामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रबाट समेत मागिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक पूर्वमन्त्रीले महराले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । रिपोर्टर्स नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर घटनाको निष्पक्ष छानविनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ती नेताले भने, ‘विगतमा पनि महिलाका विषयमा टिप्पणी गरेको र छोएको विषयमा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभएको छ ।’
वर्तमान सरकार बन्दा कानुनमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर तामाङले बँगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने महिलाहरु दुव्र्यवहारको शिकार हुनेगरेको टिप्पणी गर्दा राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए । तामाङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजीनामा दिन भनेका थिए ।
यसैगरी, महिलालाई छोएको दृश्यको भिडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । असार १५ को धान दिवस मनाउने क्रममा मन्त्री पराजुली एकजना महिलासँग टाँस्सिएको र हिलोमा खेलेको दृश्य बाहिर आएको थियो । महिलाले आफूमाथि मन्त्रीबाट त्यस्तो कुनै गलत व्यवहार नभएको बयान दिंदादिदै मन्त्री पराजुली राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए ।
यी दुई घटनामा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको नजिर बसेपनि सभामुख महराले आफूमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् । उनीमाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाब बढेको छ ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले राजीनामा मागिसकेका छन् । घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि पनि राजीनामा जरुरी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
आइतबार तीनकुनेस्थित एक महिलाको डेरामा महरा पुगी जर्बजस्ती गरेको विषय बाहिर आएको थियो । संसदमा कार्यरत कर्मचारी ती महिलाले महराले आफूमाथि जर्बजस्ती गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । File Photo
कुलमान घिसिङको नक्कली ट्विटर ह्याण्डलबाट गलत सुचना सम्प्रेषण, भ्रममा नपर्न आग्रह
काठमााडैं, २८ बैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नक्कली ट्विटर ह्याण्डलमार्फत
चुनावको दिन हवाई उडानबाट आएका यात्रुलाई होटल पु¥याउन सटल बस सञ्चालन गरिने
काठमाडौं, २८ बैशाख । आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई
लेक लागेर म्यादी प्रहरीको मृत्यु, शव ल्याउन हेलिकप्टरको माग
डोल्पा, २८ बैशाख । उपल्लो डोल्पामा लेक लागेर एक सुरक्षामा खटिएका म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको